Flickr ဆိုတာဘာလဲနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း Gadget သတင်း
Flickr ဆိုတာဘာလဲနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
Jose Rubio | | လဲ tutorial
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်သင်၏ပုံများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်စီမံကိန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အလုပ်အတွက်မဆိုသင်သိမ်းဆည်းပြီးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သောနေရာတစ်ခုလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝယုံကြည်ပါသည်။ သို့မဟုတ်သင်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုဓာတ်ပုံစီးရီးတစ်ခုရရှိရန်လိုအပ်ပြီး၊ အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရေအတွက်အတွက်ဖြစ်စေကျေနပ်ဖွယ်ရလဒ်မရှိဘဲအင်တာနက်အရှည်နှင့်အနံကိုရှာဖွေရန်လုံလောက်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြေကစကားလုံးတစ်လုံးပြောရတာလွယ်ကူတယ်။ Flickr ကို။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ ကောင်းပါတယ်၊ အလွန်လွယ်ကူသည် ရုပ်ပုံများကို ၀ ယ်ယူသိုလှောင်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ကြည့်ခြင်း၊ နှင့်မို,်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီးဓာတ်ပုံများ။ သင်သိလိုလျှင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် နှင့်အားလုံးအထက်, ဘယ်လိုရန် ဒီပလက်ဖောင်းမှဓါတ်ပုံများကို download လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
1 Flickr ဆိုတာဘာလဲ။
2 Flickr မှဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကသတ်မှတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း Flickr သည်တစ်ခုထက်ပိုသည် က်ဘ်ဆိုက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်။ ဘယ်မှာ ငါတို့ဓာတ်ပုံများကိုမိုin်းတိမ်၌ထားရှိသည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ပါဝါရှိခြင်း သူတို့ကိုစုစည်း တစ် ဦး ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းအပြင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားသောစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက် ကြောင်းတတိယပါတီများနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်း, တင်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုအခြေခံပြီးရှာဖွေပြီးစစ်ထုတ်ပါ.
Flickr သည်တစ်စုံတစ်ရာအတွက်ကျော်ကြားလာခဲ့လျှင်၎င်းသည်ထိုသို့ဖြစ်သည် အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာသူတို့အလုပ်ပြသနိုင်မည့်နေရာနှင့်ပေးသူတို့ကိုကမ္ဘာနဲ့မျှဝေနိုင်မယ်။ Instagram တွင် ၀ င်ရောက်မှုနည်းပါးခြင်းမရှိသော်လည်းအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်၊ Hashtags မှ filter လုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Feed တွင်မည်သည့်ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူများသည် Flickr ကိုရွေးချယ်ရန်အခြားမက်လုံးတစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည် 1Tb အခမဲ့ဖြစ်သည် ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်၊ အံ့ဆဲဆဲပြောင်းလဲမှုကန့်သတ် 1.000 အကောင့်အခမဲ့အကောင့်နှုန်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ် ဦး ရှိရလိမ့်မည် လိုလားသူဗားရှင်း ငွေပေးချေမှုအပေါ်သို့ဆန္ဒရှိသောအသုံးပြုသူများအဘို့ တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၅၀နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ကြော်ငြာများဖယ်ရှားခြင်း၊ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ထိတွေ့မှုပိုမိုရရှိခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းစွမ်းရည်ကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဗီဒီယိုကို 5K resolution ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်.
Pro subscription ၏သိသာထင်ရှားပြီးအသုံး ၀ င်သောနေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်သည့်အားသာချက်မှာအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်သော်လည်းသင်ရှာဖွေနေသောပုံသည်ပုံအနည်းငယ်ကိုသိုလှောင်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သင်နှင့်အတူအခြားစာရေးဆရာများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲ အခမဲ့အကောင့်အလုံအလောက်ထက်ပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မည်.
Flickr မှဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
သင်ကဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်အရာကိုစဉ်းစားခဲ့ကြပါ ပုံများကူးယူရန် Flickr အကောင့်လိုအပ်သည် အခြားအသုံးပြုသူများမှတင်ပါ၊ သင်မှန်သည် အေးဆေးတည်ငြိမ်သော်လည်းအခမဲ့အကောင့်အလုံအလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Flickr မှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကူးယူရန်၎င်းသည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရေးသားသူ download လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်ရန် ၎င်းတို့အားလုံးသည်ယင်းတို့၏အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်ဓာတ်ပုံကိုလက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးရှိလိုသူမည်သူမဆိုယင်းကိုပေးရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသူတို့မလုပ်ကြပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ရှင်မှမသန်စွမ်းသောသတင်းကိုရှာရန်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ ရုပ်ပုံများ၏ဒေါင်းလုပ် "။
ပိုင်ရှင်ကသူ၏ဓာတ်ပုံများကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုမရစမ်းကြည့်ဖို့သာကျန်တော့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်မှာ ပုံကိုကြည့်ရမယ် download သင်္ကေတ မြှားနဲ့တူပုံဖော်။ ကျနော်တို့ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် ငါတို့လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်တယ်။ သိသိသာသာအရွယ်အစားကြီးလေလေတစ်ချိန်ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေးမြင့်လေလေပါပဲ။ In download ကိုပိတ်ထားလျှင်download ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ "ကြည့်ရှုရန်အရွယ်အစားအားလုံးကိုကြည့်ပါ" ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1600 pixel အထိမြင်နိုင်သောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး.
ဒါပေမယ့်အမြဲလိုလိုတော့ငါတို့ကနှာခေါင်းအနည်းငယ်ပေးပြီးအတွင်းထဲထည့်ထားတဲ့မကောင်းသောအကြံအစည်တွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တယ်။ စခရင်ရိုက်ကူးပါ ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကြီးဆုံးမြင်နိုင်စွမ်းသို့ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းကရုပ်ပုံကိုတရား ၀ င်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမယ့်အရည်အသွေးကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး သူကကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ပြင်ဆင်ချက်စေနိုင်သည် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်မများစွာလိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်း Flickr သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအခါမသိရှိသော်လည်းထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ရှာဖွေရေးပုံရိပ်တွေ အရည်အသွေးနှင့်အတူပင် သူတို့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာသိမ်းထားပါသူတို့ကိုစနစ်တကျနဲ့လုံခြုံအောင်ထားဖို့ဖြစ်တယ် backup တခုအဖြစ်သို့မဟုတျကြှနျုပျတို့၏လုပျငနျးမြားကိုအသငျးတျောအားဖျောပွရနျ ဒါပေါ့, သင်ဓါတ်ပုံများကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် စာရေးသူကခွင့်ပြုထားသရွေ့အခြားလူများနှင့် ပတ်သက်၍၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်အကြံပြုထားခြင်းထက်ပိုမိုကြောင်း၊ သင်ပလက်ဖောင်းမှပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အကြံပြုထားခြင်းထက်မပိုကြောင်းသတိပြုရပါမည်၊ တူညီတဲ့၏စာရေးဆရာဖော်ပြပါ ၎င်းကိုအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာများ (သို့) အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ပြန်ရန်အသုံးပြုသောအခါတိုင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » Flickr ဆိုတာဘာလဲနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
Josetxo Arburua ဟုသူကပြောသည်
Josetxo Arburua အားပြန်ပြောပါ
Black သောကြာနေ့အတွက် dFlow သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်